Jumlad Waxaan leenahay "Sir Qarsoon Weyn" si aan kuugu sheegno warshad iyo soosaarayaasha | SIGAAR
Waxaan haynaa "Sir Qarsoodi Weyn" inaan kuu sheegno
Laga bilaabo 2018 ilaa halka FEELM brand technology ayaa markii hore la aasaasay, "For Next Pod" waxaa loo soo jeediyay sidii halkudhigga astaanta. Bixinta tayada iyo waayo-aragnimada ugu sareysa, boodhka xiga ee ay wadato tikniyoolajiyadda FEELM ayaa xulasho wanaagsan u ahayd bilyan isticmaalayaasha adduunka oo dhan.
wixii markaa ka dambeeyay, waxaan qornay injineerada ugu sareeya R&D waxaanan adeegsanay sayniska aasaasiga ah sida qalabka, hydromechanics, aerodynamics iyo thermodynamics si loo dhiso madal tiknoolajiyad atomis ah oo aduunka hogaamisa.
Maalmahan, waxaad ka heli kartaa jiingado xiran oo leh FEELM dhoobada dhoobada adduunka oo idil. Wada-hawlgalayaashayada waxay hayaan 70% iyo 30% saamiyada suuqa siday u kala horreeyaan Shiinaha iyo Ameerika. Laakiin waligeen kama joojinayno baaritaanka dalabaadka macaamiisha. Maxay inta badan rabaan? Maxay diiradda saarayaan? Ma awoodnaa inaan ku qancino dalabkooda anagoo horumar ka sameynay tikniyoolajiyadda?
Qeybta 1 Maxaan helnay?
Bilowgii sannadka 2020, FEELM waxay billowday sahan adduunka oo dhan ah waxayna uruurisay kumanaan waraaqo jawaab ah. Dhanka kale waxaan baranay warbixino badan oo cilmi baaris iyo fikrado ah.
Oo waxaan ku soo gabagabeynay in macaamiisha 'baacsigooda ugu dambeeya uu dhadhankiisu yahay.
Tan iyo markii boodhadhkii xirnaa ee lagu rakibay tikniyoolajiyadda FEELM la bilaabay horaantii 2018, waxaan si isdaba joog ah uga soo aruurinnay jawaab celin tobanaan kun oo isticmaaleyaasha dhamaadka ah. Iyada oo ku saleysan falanqaynta dhinacyada kala duwan iyo isbarbardhiga, waxaan ogaanay inay doorbidayaan qeybaha ay kaxeyso FEELM dhoobada dhoobada ee alaabada kale ee tikniyoolajiyada kuleylka, gaar ahaan cabirrada ku saabsan dhadhanka sida jilicsanaanta, daadashada, waxtarka gaarsiinta nikotiinka iyo joogteynta.
Qeybta 2 maxay yiraahdeen?
Jawaab celinta tobanaan kun oo macaamiil ah waxay muujineysaa in faa'iidada ugu weyn ee alaabooyinka leh FEELM gudaha ay tahay dhadhan weyn. Halka sirta qarsoon ee dhadhanka weyn ay ku jirto FEELM Coil Coil.
Qeybta 3aad Sirta Dhadhanka Weyn
Tikniyoolajiyadda kululaynta ayaa nolosheenna ka dhigaysa mid wanaagsan oo FEELM waxay dhadhanka uumiga ka dhigaysaa mid dhadhan fiican leh.
Maanta, FEELM waxay dib-u-qeexaysaa tikniyoolajiyadda kuleylka, waxay la midoobaysaa tikniyoolajiyad aad u hooseysa waxayna dhaxleysaa ruuxa caqliga. Laga soo bilaabo cirifkii ugu horreeyay illaa bilyannaad, FEELM waxay la jaanqaadaysaa tayo sare leh, iyadoo adduunka oo dhan gaarsiineysa khibrad uus ubax leh.
FEELM Coil Ceramic, Sir ku ah Dhadhanka Weyn.
Marnaba Ma Joojin Doono Sahaminta Sirta Qarsoon.
Mamnuucida Vape ee Mareykanka iyo Hareeraha ...
Canshuuraha Vaping ee Mareykanka iyo Aro ...
Hindiya: Vapers waxay ka mudaaharaadi doonaan mamnuucida Sebtember 1 ...
Faaruqinta Dhalinyarada ayaa Hoos udhacay 29% sanadka 2020, CDC Sur ...
Sigaar Cabbida, E Sigaarka Uumiga Liibiya, Newport E Sigaar, Sigaar kuleylka, E Xidhmada Sigaarka Bacaha, Epen,